San Andres၊ Santa Cruz de Tenerife, Tenerife
ကွန်ဒို၊ Townhome / Row အိမ်၊
ရောင်းရန်: Sun Andres ၏အလယ်ဗဟို၊
သမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၁၅၀ နှင့် Las Teresitas ကမ်းခြေသို့မီတာ ၃၀၀ မျှသာဖြစ်သည်။
Las Teresitas သဲသောင်ပြင်အနီးတိုက်ခန်း။
Las Teresitas သဲသောင်ပြင်အနီးတိုက်ခန်း
San Andres၊ Santa Cruz de Tenerife
Teresitas သဲသောင်ပြင်မှအဆင်ပြေပြေအိမ် ၅၀၀ !!
El Medano တွင်တိုက်ခန်းသစ်၊
Playa De San Juan ရှိပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောတိုက်ခန်း!
စန်း Juan သဲသောင်ပြင်
Los Gigantes ရှိလှပသောတိုက်ခန်း!